दाह्री पाल्ने मान्छेमा कुकुरको भन्दा पनि बढि किटाणु…. – Khabar Silo
दाह्री पाल्ने मान्छेमा कुकुरको भन्दा पनि बढि किटाणु….
कतिले दाह्रीलाई फेसनको रुपमा पनि लिने गर्छन् । कतिपय मानिसहरुको सौख नै हुन्छ दाह्री पाल्ने । हुन त दाह्री पाल्दा केही फोहोरी देखिन्छ भन्ने टिप्पणीहरु पनि हुने गर्छन् तथापी पुरुषहरु युनिक देखिन वा आफनो स्टायललाई मेन्टेन गर्न पनि दाह्री पाल्ने गर्छन् । तर दाह्री पाल्नेहरुका लागि भने एक पटक सोच्नै पर्ने अवस्था आएको छ ।
हालै बैज्ञानिकहरुले कुकुरमा भन्दा दाह्री पाल्ने मानिसहरुमा धेरै हानिकारक किटाणु तथा जीवाणुहरु हुने गरेको निश्कर्ष निकालेका छन् । बैज्ञानिकहरुले कुकुरको शरीर र मानिसको दाह्री कुनमा बढी हानिकारक किटाणु हुन्छ भनेर गरेको अध्ययनमा यस्ता तथ्य पत्ता लगाएका हुन् । अध्ययनमा समावेश प्रत्येक मानिसको दाह्रीमा जीवाणु भेटिएको थियो।
त्यसमध्ये आधा जीवाणु मानव स्वास्थ्यका लागि किटनाशक र हानिकारक भएको पाईएको छ । जबकी कुकुरहरुमा मानिसको दाह्रीमा हुने खतरनाक जीवाणुभन्दा कम संख्यामा भेटिएको उल्लेख छ । स्वीजरल्यान्ड हिर्सल्यान्डेन क्लिनिकका प्राध्यापक आन्द्रेस गटजेट र उनको टिमले १८ मानिस र ३० कुकुरमा यस किसिमको अध्ययन गरेका थिए । जहाँ १८ देखि ७६ वर्ष उमेर समुहका दाह्री पालेका मानिसहरुमाथि अध्ययन गरिएको थियो । उनले कुकुरको शरीर र रौँ मा भन्दा मानिसहरुको दाह्रीमा बढी घातक जीवाणुको संख्या भेटिएको बताएका छन् ।
अमिताभ बच्चन अस्पतालबाट डिस्चार्ज
मुम्बइ। बलिउडका दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । पछिल्लो चार दिनदेखि मुम्बईको नानावती अस्पतालमा भर्ना भएका बच्चनलाई शुक्रबार साँझ अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको हो । नियमित चेकअप भन्दै उनलाई मंगलबार बिहान ३ बजे अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि उनलाई लिन पत्नी जया र छोरा अभिषेक पुगेका थिए । यसलाई नियमित […]
एलोभेरा प्रयोग गर्न नजान्दा बन्न सक्छ विष, ध्यान दिनै पर्छ यी कुरा
Posted on December 13, 2020 Author khabar silo
काठमाडौँ । सामान्यतय हामीले एलोभेराको फाइदाबारे मात्र सुन्दै आएका छौं। तर के तपाईले यसबाट शरीरमा पर्ने नकरात्मक प्रभावबारे सुन्नु भएको छ ? विभिन्न समस्याका लागि रामबाण साबित हुने एलोभेराका पनि धेरै वेफाइदाहरु छन्। एलोभेरामा पाइने लैक्सेटिवले तपाईलाई विभिन्न नकरात्मक प्रभावहरु पार्न सक्छ। एलोभेरा छालाका लागि वरदान सावित हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा यसको प्रभाव उल्टो पर्न […]
रविन्द्र अधिकारीको क्षेत्रमा रजनी केसी उम्मेदवार